ओह ! स्टार दुनियाँ… (Oh! Star Duniya)
Aakar November 04, 2012
खचाखच दर्शकहरुले भरिएको सर्वनाम थिएटरको हलभित्र एउटा मुर्ती मञ्चको विचमा विराजमान थियो । हलमा पसेको करिब १०-१५ मिनेटपछि नाटक सुरु भएको घोषणा गरियो, त्यसपछि अचम्म भो बिस्तारै मञ्चमा रहेको कपडाले बेरिएको सेतो मुर्ती चलमलाउन थाल्यो । अघि देखि मुर्ती हो भनेर मानिएको र मञ्चको बिच भागमा त्यस्तो मुर्ती किन राख्याहोला भन्ने सोचिराको बेला, केही मुखुण्डोधारीहरु आएर उक्त मुर्तिमा बेरिएको कपडा धमाधम खोलिदिए।
नाटकमा मुख्य पात्र ‘पदम’ (राजकुमार पुडासैनी) को सहारामा अघि बढाइएको कथामा विच विचमा अन्य पात्रहरुको प्रवेश हुन्छ । ती सबै पात्रहरुको आ-आफ्नै कथा भएपनि, चुरो कुरो यही अभिनय, फिल्मी दुनियाँ र कलाकारितासँग नै जोडिएकोछ । सबै पात्रको धुन स्टार बन्ने हुन्छ, फिल्म खेल्ने इच्छा हुन्छ तर फिल्मी दुनियाँ बाहिरबाट सोचेजति सरल र सहज छैन । नाटकमा राजेश हमाल देखि रेखा थापासम्मको झल्को मिल्छ, आफूले हेरेका फिल्मका डाइलगहरु नाटकमा सुन्दा कतै आफू सिनेमाहलमा त छैन भन्ने सम्म लाग्छ ।
नाटकमा कलाकारले भोग्नुपर्ने समस्या र फिल्म उद्योगमा छाएको विकृतिहरु छताछुल्ल पारिदिएकोछ । नाटकमा कलाकारको पिडा दर्शाइएकोछ, तर ती कुराहरु नै दर्शकको लागि हँसाउने गतिला खुराक बनेकाछन् । नाटकको सुरु देखि अन्त्य सम्म हाँसेको हाँसेकै भइन्छ । यसर्थ यसलाई ‘कमेडी ड्रामा’ पनि भन्न सकिन्छ । केही वर्ष पहिले गुरुकुलमा “बादशाहको लुगा” हेर्दा जति हाँसिएको थियो, “ओह! स्टार दुनियाँ” हेर्दा त्यसभन्दा नि धेरै हाँसियो । फिल्मी शैलीमा बोलिने सम्वाद, अनि फिल्मी शैलीको हाउभाउले कतिपय दृश्यमा पेट नै दुख्नेगरि हाँस्न पाइन्छ ।
नाटक हेर्दैजाँदा कहिँ कहिँ आफैँसँग साक्षात्कार गर्न पुगिन्छ । उनीहरुले गरेका संघर्ष र उनीहरुले देख्ने गरेको सपनाबाट हामी पनि गुज्रिएकाछौँ, किनकी हामी पनि फिल्महरुबाट अति नै प्रभावित हुन्छौँ । स्लो मोसनमा देखिने दृश्यहोस् वा एउटै कुरा तिन पटक देखाइने दृश्य हुन्, यी सबैकुराले हामीलाई कहिँ न कहिँ छोएकैहुन्छ ।
अनुप बराल निर्देशित “ओह! स्टार दुनियाँ” फिल्मि दुनियाँ या भनौँ स्टार बन्ने सपना पालेर बसेका कलाकारहरुको कथा हो । फिल्मकै झल्को दिने २ घन्टा लामो नाटकमा विचमा मध्यान्तर पनि राखिएकोछ । अनि नाटकका दृश्यहरुलाई विभिन्न खन्डमा विभाजन गरिएकोछ। निर्देशक अनुप बरालले आफ्नो निर्देशकीयमा भनेजस्तै, “यो नाटकको सबैभन्दा शक्तिशाली पक्ष भनेको नै जीवनको विकट स्थितीमा पनि आफ्नो इच्छा, रहर र सपनाको मूल्यलाई हराउन नदिनु हो” । "ओह ! स्टार दुनियाँ " भारतका युवा नाटककर निल चौधरीले लेखेको तारामंडल नामक नाटकको नेपाली रुपान्तरण हो, जुन चर्चित फिल्मकार सत्यजित रे को लघु कथामा आधारित छ ।
तपाई नाटक हेर्न मनपराउनुहुन्छ वा मन खोलेर केहीबेर हाँस्न चाहनुहुन्छ, वा आजसम्म थिएटरमा गएर नाटक नै हेर्नुभएको छैन भने पनि “ओह! स्टार दुनियाँ” हेर्न सुझाउँछु । दशैँ अघि ११औ पटक मन्चन भएको एक्टर्स स्टुडीयोको प्रस्तुति नाटक "ओह ! स्टार दुनियाँ " फेरि मञ्चन भएको छ र यो कार्तिक २५ गते (10th November 2012) सम्म सर्वनाम थिएटर, कालिकास्थान, घट्टेकुलोमा चल्नेछ। यो नाटक प्रत्येक दिन बेलुका ५:०० बजे सुरु हुन्छ ।
दशैँ अघि हेरिएको यो नाटक मलाई पुन: हेरौँ हेरौँ लाग्दैछ, सायद यो हप्तामा फेरि एकपटक सर्वनाम पुगेर मन खोलेर २ घन्टा हाँसिनेछ ।